Arduino Yún, bọọdụ ịbanye na ofntanetị nke Ihe n'efu | Akụrụngwa n'efu
Internetntanetị nke Ihe ma ọ bụ nke a makwaara dị ka IoT agbanweela ụwa teknụzụ ma rutekwa ọtụtụ ọrụ anyị (ma anyị chọrọ ma ọ bụ achọghị). Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ ji achọ bọọdụ na-ahazi mmemme ha, nke ahụ adịghị ọnụ, yana ọ na - ejikọkwa na withoutntanetị na - ejighi igodo ikuku ma ọ bụ kaadị ntanetị. Maka ọtụtụ, nke ikpeazụ bụ ihe ngwangwa ngwa ngwa, mana ọ pụtaghị na ọ bụ azịza ọkachamara ma ọ bụ nke dị irè.
Nyere nke a, otu nke Ihe oru Arduino eweputala osisi nke ejiri ya na ofntanetị nke Ihe. A na-akpọ bọọdụ a Arduino Yún.
1 Ọnye na-bụ Arduino Yún?
2 Kedu ihe dị iche n'etiti Arduino Yún na Arduino UNO?
3 Gịnị bụ Openwrt-Yún?
4 Kedu ka esi enweta nhazi Arduino Yún?
5 Kedu ihe m ga - eme Arduino Yún?
Ọnye na-bụ Arduino Yún?
Arduino Yún bụ bọọdụ sitere na Arduino Project. Nke a pụtara na imepụta ya na imepụta ya nwere ike ịre onwe anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla yana ịnwe ike iji atụmatụ ya iji mepụta ụdị na mbadamba onwe onye. N'ihe banyere Arduino Yún, nke ikpeazụ a ga-abụ otu nzọụkwụ, ebe ọ bụ na ọ dabeere na Arduino Leonardo, ihe atụ dị ike karịa Arduino UNO.
Arduino Yún nwere otu imewe na otu njikwa dị ka Arduino Leonardo, nke ahụ bụ, ihe nhazi ahụ Atmel ATmega32U4. Mana, n'adịghị ka Arduino Leonardo, Arduino Yún nwere obere mbadamba ikuku Atheros AR9331, oghere maka kaadị microsd na isi akpọ Linino.
Kedu ihe dị iche n'etiti Arduino Yún na Arduino UNO?
N'iburu n'uche ihe dị n'elu, ọdịiche dị n'etiti ụdị Arduino Yún na ihe atụ ahụ doro anya Arduino UNO. Mana enwere ụfọdụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’ịle anya n’isiokwu anyị bipụtara n’oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ Arduino enweghị ọtụtụ ihe ndị mbadamba ndị ọzọ dịka Raspberry Pi nwere, mana Arduino Yún enweghị.
Isi ihe a na-akpọ Lininus bụ isi nke na-enye ike zuru ezu nwere obere nkesa a na-akpọ Openwrt-Yún. Ihe nkesa a na-eji kernel Linux na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eme Openwrt enwere ike itinye ya na ngwaọrụ ọ bụla nwere bọọdụ atheros ma ọ bụ nke yiri ya.
Gịnị bụ Openwrt-Yún?
N'oge a, ọ dị mma iji kwụsị nkenke banyere ihe Openwrt-Yún bụ na ihe kpatara ya ji dị mkpa.
OpenWRT Ọ bụ Gnu / Linux nkesa na-agbanwe maka ihe ọ bụla rawụta na kaadị ikuku. N'okwu a, Openwrt-Yun bụ nkesa gbanwetụrụ ka etinye ya na Arduino Yún. Ihe nkesa a bi na Linino ma nwee ike gbasaa ekele maka oghere maka kaadị microsd. Iji nwee ike iji ọrụ ndị a, naanị anyị ga-ejikọ na bọọdụ ahụ site na ssh ma jiri njikwa ngwugwu nkesa yana ngwaọrụ ndị ọzọ.
Ọ baghị uru ikwu, nkesa a ọ ga - enye anyị ụfọdụ ọrụ aka mara mma nke sistemụ arụmọrụ nwere mana ọ bụghị otu ka bọọdụ Raspberry Pi enwere ike iji ya dị ka minicomputer ma ọ bụ pc ochie nke anyị nwere ike iji dị ka ihe nkesa ma ọ bụ akụkụ nke ụyọkọ.
Kedu ka esi enweta nhazi Arduino Yún?
Iji nweta nhazi Arduino Yún, anyị ga-ewere usoro abụọ n'ime akaụntụ:
Wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ka pc wee mata ya na Arduino IDE
Hazie interface dịpụrụ adịpụ maka njikọ na usoro "akwa" maka mmemme onwe gị iji interface wireless.
Nzọụkwụ mbụ dị mkpa ebe ọ bụ na oge ụfọdụ anyị ga-eziga mmemme na data na bọọdụ Arduino Yún. Maka nke a, naanị anyị ga-eme ya wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala wee gbaa Arduino IDE ọsọ. Ọ bụrụ na anyị nwere Arduino IDE na Gnu / Linux, nsogbu agaghị adị na nke a ma anyị agaghị eme ihe ọ bụla; Ọ bụrụ na anyị nwere Windows, ndị ọkwọ ụgbọala maka ụdị a yana ụdị Arduino ndị ọzọ ga-arụnyere na Arduino IDE, yabụ mkpa ọ dị iji IDE a; Ma ọ bụrụ na anyị nwere mac OS, anyị ekwesịghị ime ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị ejiri Arduino IDE, mana oge mbụ anyị jikọtara bọọdụ Arduino Yún na Mac anyị, ọkachamara ọkachamara na keyboard ga-apụta, ọkachamara nke anyị ga-emechi jiri bọtịnụ uhie. Ọ bụ nsogbu na-egosi na gosipụtara ukara website nke Arduino Yún.
Nzọụkwụ ọzọ anyị nwere mmata ịmara bụ njikọ na nchịkwa nke usoro Arduino Yún Wi-Fi. Mbụ anyi g'anyi nyee ike efere; nke a ga - eme ka bọọdụ ahụ mepụta wifi network a na - akpọ Yún. Anyị jikọọ na netwọk a na nchọgharị anyị na-ede adreesị http: //arduino.local Adreesị a ga-emepe weebụsaịtị nke anyị nwere ike ijikwa netwọk ọhụrụ emepụtara. Aha njirimara na okwuntughe nke ngalaba a bụ "arduino", Okwu anyị nwere ike ịgbanwe ozugbo anyị banye na ngalaba.
Mana, ọ bụrụ na anyị ejiri Arduino Yun, ihe anyị ga-achọ bụ ijikọ na Wi-Fi network ma ọ bụghị mepụta netwọkụ anyị. Iji mee nke a, na panel nke emepere, na ala enwere ndọtị ya na ihe ndị dị na ya iji jikọọ na netwọk Wi-Fi ọ bụla, ewezuga netwọọdụ mahadum na netwọkụ ndị ọzọ yiri ya na-eji ogbugba ndu na sọftụwia ngwanrọ eme ka ọ ghara ikwe omume (ka) njikọ a na ụdị efere.
Ọ dị mma, anyị amaraworị otu esi emepụta netwọ Wi-Fi nke gị, jikọọ na netwọk Wi-Fi ọzọ, mana kedu ka m ga esi eji njikọ a na bọọdụ na / ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ?
Ọ dị mma maka ya anyị ga-eji ọrụ Bridge rụọ n'ime mmemme anyị mepụtara na Arduino IDE. Ọrụ ahụ na-amalite site na Bridge.begin (), ọrụ nke ga - enyere anyị aka ikwukọrịta na arụmọrụ nkịtị yana ọrụ ikuku nke Arduino Yún board.
Kedu ihe m ga - eme Arduino Yún?
Site na mmemme dị mkpa, anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla na teknụzụ ọ bụla "nwere ọgụgụ isi" ekele maka bọọdụ Arduino Yún. Otú ọ dị, ihe kachasị bụ iji mbadamba ka gadget kere wee nwee ike jikọọ na Internetntanetị ma nwee ike ịmegharị ya site na ngwaọrụ ọzọ dị ka ama, mbadamba ma ọ bụ pc.
Usersfọdụ ndị ọrụ jisiri ike iji mbadamba dịka kaadị kaadị na-adịghị ahụkebe, mana anyị ga-ekwu na ịme nke a siri ike na ọnụahịa bọọdụ ahụ dị elu karịa kaadị netwọọdụ nkịtị. Gbanye Ozizi ị nwere ike nweta obere onye ofufe ihe enwere ike ime na Arduino Yún. Naanị anyị ga-ede aha mbadamba ahụ na igwe nchọta ihe na ọrụ dị iche iche na-eji ihe nlereanya a ga-apụta.
Arduino Yún bụ bọọdụ na-adọrọ mmasị ma dị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ n'ihi na ruo mgbe ọ bịarutere, onye ọ bụla chọrọ ijikọ ọrụ ya na hadntanetị ga-azụrịrị bọọdụ Arduino gbakwunyere mkpuchi wireless ma ọ bụ GSM nke na-enye ohere njikọ ahụ. Ọnụ ego ahụ dị elu karịa Arduino Yún na mmemme siri ike karị nwere ọtụtụ mmachi. Arduino Yún na-agbazi ihe a niile ma na-enye gị ohere ịmepụta ngwa na ike dị ike karịa ugbu a. Mana oru ngo anyi nwere ike adabara ndi ozo ndi ozo dika Raspberry Pi Zero W. N'onodu obula, ma Arduino na Rasberi Pi na-agbaso ntuziaka ngwanrọ na ntaneti na nke a putara na anyi nwere ike ichoputa mbadamba na azịza ya na ahughi oru anyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Arduino Yún, bọọdụ iji banye na ofntanetị nke Ihe n'efu
Ndewo, Eprel 24, 2018, ogbe a gosipụtara na ọ bụ onye nrụpụta wepụrụ, n'ihi na ọ naghị agbaso iwu ọ bụla.
Ihe na-ewute m bụ na ọta yun nwere ya na katalọgụ ahụ.
M na-ahapụ njikọ: https://store.arduino.cc/arduino-yun
Ana m achọ ihe ọzọ maka ọrụ m, m ga-enwe ekele maka aro ọ bụla.